यात्रा, पर्यटन | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: यात्रा, पर्यटन
बोल्भर रङको लम्बाइ के हो? यस घण्टीमा कतिवटा बेलुकाहरू समावेश छन्?
बुलेभार्ड रिंग कति लामो छ? यस औंठीले कति बुलेभार्ड समावेश गर्दछ? १० किमी र १० बुलेभार्ड बोउलेभर्ड रिंग मस्कोको केन्द्रीय प्रशासनिक जिल्लामा सडकको निरन्तर अनुक्रम हो, दश हो ...
बुर्खा कसरी र कहाँ देखा पर्यो?
बुर्का कसरी र कहाँ देखा पर्‍यो? यो अनुहारमा घुम्टो होईन, तर लामो झूटा बाहुलाहरू सहित पनि फराकिलो लुगा, यसलाई टाउकोमा फ्याँकिन्छ र टाउकोको मुकुटबाट सम्पूर्ण आकृतिलाई समेट्छ ...
कठपुतली थियेटरहरूको इतिहासबारे के थाहा छ?
कठपुतली थिएटरहरूको इतिहासको बारेमा के थाहा छ? अन्वेषकहरूका अनुसार dol० हजार बर्ष पहिले पुतलीका प्रोटोटाइपहरू देखा परेका थिए, केवल उनीहरू मात्र मनोरन्जनका लागि प्रयोग गरिएको थिएन, तर जादुई संस्कारका लागि। अझै ...
ट्रांसिल्वेनिया कहाँ छ?
ट्रान्सिलभेनिया कहाँ छ? रोमानिया ओह, सबै स्मार्ट, पहिले नै डरलाग्दो, इन्टरनेट खोलेको र देखाएर)। तपाईका छिमेकीहरू सुन्नुहोस्, म मोल्डोभाबाट हुँ, हामी रोमानियाका छिमेकी छौं। ट्रान्सिल्भेनिया एक रोमानियाई क्षेत्र हो, बीचमा अवस्थित ...
इटालीको राजधानी ...
इटालीको राजधानी ... सन्‌ १1871१ पछि, भिक्टर इमानुएल अन्तर्गत? इटाली कहिले एकजुट भयो? रोमको स्थापनाको मिति दिनसम्म चिनिएको छ (जुन सावधानीपूर्वक ईतिहासकारहरूले प्रश्न गर्छन्) - अप्रिल २१, 21 753 ...
लेक विक्टोरिया बेसिनको उत्पत्ति?
लेक भिक्टोरिया बेसिनको उत्पत्ति? भिक्टोरिया टेक्टोनिक ताल तालको उत्पत्ति भिक्टोरिया यो ग्रहमा दोस्रो सबैभन्दा ठूलो ताजा पानी ताल हो। यो १ 1858 XNUMX मा अ English्ग्रेजी यात्री र अफ्रिकी अन्वेषक जोन द्वारा पत्ता लगाइएको थियो।
किन अमेरिकामा राज्यले शरणार्थी प्रहरीहरूले विभिन्न संख्यामा किरणहरूसँग ताराहरू लगाउँछन्?
अमेरिकाका राज्यहरूमा शेरिफ प्रहरीहरूले किन विभिन्न नम्बरका रेहरू लगाउँछन्? रैंकमा निर्भर गर्दछ - USA -eto kak izwestno federazija, i kazhdij stat imeet swojo prawitelstwo i swoju konstituziju i ...
म्यूनिखको संसारको बिरालो कहाँ हुन्छ, कुन देशमा?
विश्व बिरालोमा म्युनिक कहाँ छ, कुन देशमा? म सिग्नरसँग पूर्ण सहमत छु। म्यूनिख पाठ्यक्रम जर्मनी मा छ। तपाईं राम्रो दिनभर इन्टरनेट सर्फ छैन, तर भूगोल अध्ययन! ...
Tian-an-Men Square मा के भयो?
Tien-an-men वर्ग मा के भयो? हामीले देश बचाई समृद्धिमा पुर्‍यायौं। यी सबै ट्रेलमेकरलाई फाँसी दिइनु पर्छ। जताततै ... यदि राज्य आपतकालीन समितिले snot चर्वाउँदैन भने, त्यसो भए सबै चीज अझै पक्कै हुनेछ ...
उत्तर अमेरीका मा पर्वत
उत्तर अमेरिकामा पहाडहरू अपलाचियन कोलोराडो *** रकी माउन्टेनस्, उत्तर अमेरिकाको कर्डिलरा प्रणालीमा, पश्चिमी अमेरिका र क्यानाडामा, and० र 60२ सेकेन्डको बीचमा। sh नक्शामा स्थान ...
पहेंलो पानीको शहर कहाँ छ?
पहेलो पानीको शहर कहाँ छ? नेप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र, युक्रेन, नेप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्रमा यो शहरको नाम झल्टा नदीसँग नजिकै सम्बन्धित छ, जसलाई पानीको रंगको आधारमा नाम दिइएको छ, फलामको खनिज पदार्थको अक्सिडिनेसनले र colored्गाएको छ। उपत्यका ...
भौगोलिक वस्तु कहाँ छ - वाल्दाई र यो कस्तो प्रकारको भौगोलिक वस्तु हो?
भौगोलिक वस्तु कहाँ छ - वल्दाई र कस्तो प्रकारको भौगोलिक वस्तु यो रूसको १ Val1770० देखि) क्षेत्रीय अधीनता, नोभ्गरोड क्षेत्रको वाल्दाई जिल्लाको प्रशासनिक केन्द्र हो। जनसंख्या १.18,1.१ हजार ...
एलिस्टा कहाँ छ?
एलिस्टा कहाँ छ? यदि तपाईं मस्कोका हुनुहुन्छ भने, तपाईंले बुझ्नुहुने छैन) तर यदि तपाईंले स्कूलमा जर्जिया सिकाउनुभयो भने, तपाईंले एट्लासमा कल्मीकिया पाउनुहुनेछ) एलिस्टा राजधानी हो। मारी क्षेत्र http: //www.gorod-elista.ru / ...
गौम शहर कहाँ छ?
गोमेल शहर कहाँ अवस्थित छ? बेलारुस मा। गोमेल क्षेत्रमा यो बेलारस हो। लुकाशेन्काको बेलारुसमा बेलारूस छ। बेलारुस मा! यो सहि उत्तर हो)) बेलारुसमा, सिमानाबाट टाढा छैन! बेलारुस मा। नजिकै ...
र कसलाई थाह छ कहाँ बोरोसोगलेबस्क शहर
र कसलाई थाहा छ कहाँ बोरिसोगलेब्स्क शहर हो बोरिसोगल # 769 1779;; bsk शहर (१ 68,2 since देखि), भोरनेज क्षेत्रको बोरिसोगलेब्स्क जिल्लाको प्रशासनिक केन्द्र। जनसंख्या .2005 XNUMX.२ हजार मानिस (२०० XNUMX) शहर नदीको बाँया किनारमा अवस्थित छ ...
समारा को हातहरु को कोट मा एक बकरी किन छ?
किन त्यहाँ समाराको हतियारको कोटमा एउटा बोका छ? पहिलो पटक सामारा शहरको हतियारको कोट १ 1729२ -1730 -१8 को "प्रसिद्ध आर्मोरियल" मा उल्लेख गरिएको थियो। मार्च,, १ 1730० मा सामारा सहित रूसी साम्राज्यका शहरहरूको हतियारको कोट स्वीकृत भयो। खुल्ला ...
अल्बर्ट आइंस्टीन को को थिए र उनी किन अमेरिका को लागि छोड्यो?
राष्ट्रियताका आधारमा अल्बर्ट आइन्स्टाइन को हुन् र उनी अमेरिका छाडे किन? पस्कोभ क्षेत्रबाट, ऊ, हाम्रो, आदिम, उसका शत्रुहरूले चोरी गर्यो! ऊ आफैंमा गइहाल्ने छैन, किन भने फार्म- ना काभो! जर्मन ...
कुन वर्षमा ट्रफीगर स्क्वायरले देखाएको थियो?
ट्राफलगर स्क्वायर कुन वर्ष देखा पर्‍यो? १ 1820२० ट्राफल्गर स्क्वायर, पुरानो शाही अस्तबलको साइटमा अवस्थित लन्डनको मध्यवर्ती वर्ग हो जुन लन्डनको धेरै राजमार्गहरू जोड्दछ: पाल् मल्ल, स्ट्रान्ड, चेरि Cross क्रस र वाइटहल ...
कसको कुकुर यो थियो? स्मारकको नाम के हो?
यो कसको कुकुर थियो? स्मारकको नाम के हो? mumu ... यो स्मारक घरविहीन जनावरको मानवीय दृष्टिकोणको लागि समर्पित छ।मेन्डेलेभास्काया मेट्रो स्टेशनको लबीमा, Sympathy को स्मारक खोलियो। अब सबवेका यात्रुहरूलाई काँसाद्वारा स्वागत गरिनेछ ...
अष्ट्रेलियामा र उनीहरूको क्यानाडाहरू के हुन्? कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अष्ट्रेलियामा के राज्यहरु र उनीहरुको राजधानी कृपया उत्तर दिनुहोस् अष्ट्रेलिया यो राज्य हो। राजधानी सिड्नी हो। अष्ट्रेलियाको संघ - क्यानबेरा, तस्मानिया - अस्ट्रेलियाको राज्य यही नामको टापुमा अवस्थित छ, २240० किलोमिटर दक्षिणमा ...
77 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,790 प्रश्नहरू।